Diyaaradaha aan cathing jiirada dhexsocoto ah.
Diyaaradaha aan cathing jiirada dhexsocoto ah. sano 3 3 bilood ka hor #479
Dhab ahaantii i bixi 737 164 pack saldhig naaftaadu iyo saldhig B787 pack iyo markii i duuli in i ogaato in aan la qaadaan jiirada dhexsocoto ah. Waxaa si toos ah khadadka la runway, laakiinse raafkiisu ma qabsatay jiirada dhexsocoto ah.
Diyaaradaha aan cathing jiirada dhexsocoto ah. sano 3 3 bilood ka hor #482
Subax wanaagsan (ok sidoo farsamo halkan Texas galabtii).
Waxaan u muuqdaan in ay u soo duuli ee B747-400LCF wakhtiga intiisa badan, iyo dareentay in sidoo kale la MOST of My diyaaradaha. Ma hubo sababta in uu yahay, si daacad ah. Waxaan u muuqdaan in ay noqon wanaagsan oo ku saabsan "duulaya kubada" gacanta, laakiin daacadii ... Anigu ma aan ku aamini lahaa computer ah loo sameeyo ii lol waan ogahay QW757 uh ku samayn doonaa, laakiin waxa ay si daacad ka dhigaysa Me habdhiska lol
Diyaaradaha aan cathing jiirada dhexsocoto ah. sano 3 3 bilood ka hor #497
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 5
Hubi in marka aad gelin "dhawaansho" on, aad gab "HLD ALT"
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Gh0stRider203, JanneAir15
Diyaaradaha aan cathing jiirada dhexsocoto ah. sano 3 3 bilood ka hor #500
Aa ... hadda waxaan ognahay sababta aan u lahaa dhibaatooyinka la Airbus Mashruuca A380. Aad ayaad u mahadsantahay for caawiyo mar Tonny0909!
Diyaaradaha aan cathing jiirada dhexsocoto ah. sano 3 3 bilood ka hor #518
Waad ku mahadsan tahay in aad soo jeedin, laakiin dhibaatooyinka ka libdhay marka i helay sp2 rakibay on my nidaamka.
Diyaaradaha aan cathing jiirada dhexsocoto ah. sano 3 3 bilood ka hor #519
Waxaan u lahaa dhibaatadan ka hor iyo sida ugu wanaagsan ee ka qaban la tahay in midkood la dhiso on localiser hore iyo height isku mid ah ama meel fog ka mid ah ka ordaana laakiin hoose ee sare. Sidoo kale waxa ay kaa caawin kartaa waa haddii sida ugu dhaqsaha badan aad u adkayn on ILS ku riix Qabasho hab. isku day kuwaas oo haddii aanay samayn watch trick ka on youtube ama meel kale. localisers intooda badan waa qiyaastii 2000-2500ft sida meesha ugu fiican ee ay noqon. Iyaga u abaalmari oo dhan ka hor.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.351